May | 2009 | Moe Nay
ငါ့ကောင်းကင်မှာ ကြယ်တွေ မလင်းလက်တော့ဘူး။ ပြန်မဆုံနိုင်တော့တဲ့ညနေခင်းတွေကို ငါ ပြန်တမ်းတလွမ်းမောနေရပြီ။ ခဏတာ ဆေးခြယ်ခဲ့တဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းပန်းချီကားတစ်ချပ်ဟာ အခုတော့ အနက်ရောင်စုတ်ချက်ကြမ်းကြမ်းပဲ ကျန်ရစ်ခဲ့တော့တယ်။ သံယောဇဉ်ဆိုတာ မွန်းကြပ်တဲ့ အရာတစ်ခုပဲဆိုတာ သိလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ ငါ့ခြေလှမ်းတွေ ရုတ်သိမ်းလို့ မရ တော့ဘူး။ အရာရာဟာ နောက်ကျသွားခဲ့ပြီ။ ငါ ကိုယ်တိုင် ပျော်ဝင်နစ်မျောခဲ့တဲ့ အရာအတွက် နောင်တတော့မရခဲ့ပါဘူး။ ကျေနပ်စရာပါပဲ။ ဘ၀မှာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကော.. ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးခဲ့တာအတွက်ပါ ငါ့ရင်ထဲမှာ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်နေမိမှာပါ။ ဘ၀ တစ်ခုလုံးအတွက်လည်း အမှတ်တရတန်ဖိုးကြီးလက်ဆောင်အဖြစ် ထာဝရသိမ်းဆည်းထား မှာပါ။ (ရင်ထဲမှာ တိတ်တခိုးလေးပေါ့)။
မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သိရဲ့နဲ့ ဖြစ်ချင်နေခဲ့တယ်။ မရနိုင်မှန်း သိရဲ့နဲ့ လိုချင်နေခဲ့တယ်။ ကိုယ် တောင်းသလောက် ပေးမယ်လို့ ဘယ်သူကများ အာမခံခဲ့လို့လဲ။ ကိုယ်ပေးသလောက်ကော ပြန်ရ မယ်လို့ကော ဘယ်သူက ကတိပေးခဲ့လို့လဲ။ သိသိရက်နဲ့ မိုက်မဲခဲ့မိတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်
လှည့်စားရင်း.. မနက်ဖြန်တွေကို ညာမှန်းမသိ ညာနေခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ရတယ်။ (ဘယ်သူ့ကိုယ်မှ မညာဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ ညာခဲ့သူတစ်ယောက်)။ ကိုယ်က ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အပြည့်ပေးခဲ့ပေမယ့် ကိုယ်ပြန်ရလိုက်တဲ့ ၁ ရာခိုင်နှုန်း (ဒါတောင် ပြည့်ကောပြည့်ရဲ့လားဆိုတဲ့ သံသယနဲ့) အတွက် ၀မ်းနည်းကြေကွဲရုံကလွဲပြီး ဘာတတ်နိုင်ဦးမှာလဲ။ ဘာများ စောဒက တက်ခွင့်ရှိဦးမှာလဲ။ သူ ကိုယ့်ကို ပေးခဲ့တာကကော အစစ်အမှန်လား … အတုအယောင်လား…. မသေချာ မရေရာပါဘူး။ အစစ်အမှန်လို့ပဲ ယုံကြည်ချင်ပါတယ်။ ယုံလည်း ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။
ငါ့ရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ခိုးယူစားသုံးသွားခဲ့ပြီ။ သူက ခိုးယူသွားတာလား… ကိုယ်ကပဲ အရာရာပေးလိုက်တာလား… ကိုယ့်ကိုယ်လည်း ဝေခွဲမရတော့ဘူး။ သေချာတာ ကတော့ အခုဆိုရင် ငါ မပျော်တတ်တော့ဘူး။ ရှင်သန်နေရတဲ့ နေ့ရက်တိုင်းက နွေပန်းချီ ကားတစ်ချပ်လိုပဲ ပူလောင်ခြောက်သွေ့နေပြီ။ အရာရာ ပြောင်းလဲသွားလိုက်တာ။ အေးမြတဲ့ မိုးရေစက်တွေတောင် ငါ့ရင်ကို မအေးမြစေနိုင်တော့ဘူး။ မိုးစက်တွေနဲ့အပြိုင် ရင်ထဲမှာ ငိုနေရပြီ။ မြင်မြင်သမျှ တွေ့တွေ့သမျှ အရာအားလုံးဟာ ကြေကွဲမှု ပြကွက်တွေပဲ။
တစ်နေ့နေ့ ကာင်းကင်မှာ ကြယ်လေးတစ်ပွင့် ယောင်ယမ်းပြီး ပြန်လင်းလာမလားလို့ ………..
Posted in တွေးမိတွေးရာ |3Comments »
You are currently browsing the Moe Nay blog archives for May, 2009.
ဂြိုဟ်ကမ္ဘာတစ်ခုရောက် သက်ရှိမျိုးစိတ်တစ်ခုရဲ့ မှတ်ချက် ငါတို့ မမှားဘူး အမှန်တရားနဲ့ သီသီလေး လွဲသွားတာတစ်ခုပါပဲ။ ။ နေမျိုး ထရပ်ကားပေါ်မှ သစ်သီးတွေ